အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက် Anti-Cut Stab ခံနိုင်ရည်ရှိသောသံမဏိကြိုးကြိုးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်အိတ်များကို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မျှ | WoopShop®
အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းများအတွက် Anti-Cut Stab Resistant Stainless Steel Wire Mesh Safety လက်အိတ်များ
$9.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $13.99
အရွယ် XL XXL S M L
XL / Grey က XXL / Grey က S / Grey M / Grey L / Grey က
အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက် Anti-Cut Stab ခံနိုင်ရည်ရှိသောသံမဏိဝါယာကြိုးကွက်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးလက်အိတ်များ - XL / Grey backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
ခွဲခြား: အလုပ်လုပ်ကိုင်လက်အိတ်များ, ချက်ပြုတ်လက်အိတ်
ပစ္စည်း: HPPE (မြင့်မားသောဖိအား polyethylene)
လိင်: အမျိုးသမီးများ၊ အမျိုးသားများ၊ Unisex ဖြတ်ခံနိုင်သောလက်အိတ်များ
ဇာထိုးပစ္စည်း stretchy ဖြစ်ပါတယ်။
အကာအကွယ်ဖြတ်တောက်နိုင်မှုကာကွယ်ခြင်း - နိုင်လွန်၊ spandex, UHMWPE, ဖန်မျှင်အမျှင်
လက်ချောင်းငါးချောင်းစီ၊ တစ်ခုချင်းစီမှာ stainless steel လက်အိတ်တစ်လုံး၊ ဝါဂွမ်းအဖြူရောင်လက်အိတ်တစ်လုံး၊
လက်ျာနှင့်လက်ဝဲလက်နှစ် ဦး စလုံးမှ fit
လုပ်ဆောင်ချက် - ဖြတ်နိုင်သည့်ဒဏ်၊ ထိုးနှက်ဒဏ်ရာ၊ ဓားဖြင့်တိုက်ခြင်း။ Anti-Scratch
အကာအကွယ်တန်း - ၅
မှတ်စု: ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားပေါ်တွင်လက်အိတ်၏ကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များကြောင့်, ရရှိသောအမှန်တကယ်အရာဝတ္ထုနိုင်ကြလိမ့်မည်။ လက်ဖြင့်တိုင်းတာမှုကြောင့် ၁-၂ မီလီမီတာကွာခြားမှုကိုခွင့်ပြုပါ။
၁ တွဲ * ဖြတ်ခံနိုင်သောလက်အိတ်
מוצרמעולה။ ממליץבחום ...
တစ် ဦး ချီလီသည် demoro tres semanas,ala fito y descripciónကိုက်ညီတဲ့
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အမြန်လာ! ကောင်းသောစတိုးဆိုင်! ငါအကြံပြု!